Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Sayensị -> Mgbakwunye
1 TIMỌTI ๖:๒๐
Biko, Timoti, ahapụkwala imezu ihe ndị a Chineke tinyere gị nꞌaka ime. Wezuga onwe gị nꞌirụ ụka nzuzu nile nke ndị ahụ na-anya isi banyere amamihe ha nwere, na-achọ ka i soro ha rụọ ụka. Ndị a na-esite nꞌinya isi ha gosi nꞌezie na ha amaghị ihe ọ bụla.
“Ahụhụ dịrị unu ndị ozizi iwu nꞌihi na unu na-ezonarị ndị mmadụ eziokwu ka ha hapụ ịmata ya, ma unu onwe unu jụrụ ịnabata eziokwu ahụ. Unu adịkwaghị enye ndị ọzọ ohere ka ha nabata ya, kwerekwa ya.”
Ị na-agụkwa onwe gị dị ka onye nkuzi ndị na-amaghị ihe, na onye nkuzi ụmụntakịrị, nꞌihi na ị maara iwu Chineke nke ọma, jupụtakwa nꞌamamihe na eziokwu.
 Nꞌihi na mgbe ahụ kwa ka mmụọ ozi nke asaa fụrụ opi ike ya. Mgbe ọ fụrụ opi ya oke olu dị iche iche sitere nꞌeluigwe na-ada nꞌike nꞌike na-asị, “Alaeze nile nke ụwa abụrụla alaeze Onyenwe anyị, ya na Kraịst ya. Ya onwe ya ga-achịkwa achị nꞌebe ihe nile e kere eke dị ruo mgbe nile ebighị ebi.” Mgbe ahụ kwa iri ndị okenye abụọ na anọ ahụ na-anọkwasị nꞌocheeze ndị ahụ dị nꞌihu ocheeze Chineke na-ada nꞌala, na-akpọ isi ala nye Chineke. Ha na-enyekwa ya otuto site nꞌife ya ofufe na-asị, “Anyị na-enye gị otuto, gị Onyenwe anyị, Chineke, Onye pụrụ ime ihe nile. Onye na-adị site na mmalite, onye dịkwa ugbu a, nꞌihi na i werela ike nile nꞌaka gị. Ị malitekwala ọchịchị gị. Ụwa nile were oke iwe megide gị, ma ugbu a bụ oge gị iweso ha iwe dị ọkụ. Ugbu a bụ oge ikpe ndị nwụrụ anwụ ikpe, na ịkwụghachi ndị na-ejere gị ozi ụgwọ ọrụ ha, bụ ndị nile na-ezisa ozi ọma gị na ndị gị nile, bụ ndị na-atụ egwu gị. Ndị dị nta na ndị dị ukwuu. Oge eruokwala mgbe ịla nꞌiyi ga-abịakwasịkwa ndị nile e siri nꞌaka ha webata mmebi nꞌebe ihe Chineke kere dị.”
 Kraịst bụ nnọọ oyiyi Chineke onye anyị na-apụghị ịhụ anya. Ọ nọ na-adị ndụ tupuu Chineke ekee ihe ọ bụla e kere eke. Nꞌezie, ọ bụ site nꞌaka Kraịst ka e ji kee ihe nile dị nꞌụwa na nke dị nꞌeluigwe, ndị anyị pụrụ ịhụ anya na ndị anyị na-apụghị ịhụ anya. Ike nile dị iche iche, ma ike nile nke mmụọ dị iche iche, ya na ndị isi ha nile, na alaeze ha, ma ndị na-achị achị nꞌetiti ha, ma ndị na-atụ ihe ga-eme eme. Kraịst kere ihe nile. O kere ha iji ha ịrụ ọrụ dị ka o si dị ya mma, na isite na ha wetara onwe ya otuto.
Mgbe m lere anya, ahụrụ m otu Nwa atụrụ ka o guzo nꞌihu iri ndị okenye abụọ na anọ ahụ, nꞌihu ocheeze ukwu ahụ, na nꞌihu ihe e kere eke anọ ahụ. Nwa atụrụ ahụ nwekwara apa dị iche nꞌahụ ya, bụ nke mere ka ọ nwụọ nꞌoge ọ nwụrụ. O nwekwara mpi asaa na anya asaa nke nọ ọnọdụ mmụọ asaa nke Chineke, nke a na-ezipụ ịga nꞌebe dị iche iche nꞌime ụwa.
Ọ na-arụ ọrụ ịtụnanya a mgbe ọ bụla anụ ọhia nke mbụ nọ na-ele ya anya. Ọ na-arụkwa ọrụ ndị a iji ya iduhie mmadụ nile nọ nꞌebe nile. O nyekwara iwu ka ndị nile bi nꞌụwa kpụọ ihe yiri anụ ọhia nke mbụ ahụ nwere ọnya gaara ewetara ya ọnwụ nꞌotu isi ya, bụ anụ ọhia e mekwara ka ọnya ya laa.
Ma nwanyị a ị hụrụ nꞌime ọhụ gị nọchiri anya obodo ukwu ahụ na-achị ndị eze nile dị nꞌụwa.
Kraịst bụ nnọọ oyiyi Chineke onye anyị na-apụghị ịhụ anya. Ọ nọ na-adị ndụ tupuu Chineke ekee ihe ọ bụla e kere eke.
Ọ dịbeghị onye ọ bụla ji anya ya hụ Chineke anya mgbe ọ bụla, ma Jisọs Kraịst, onye nanị ya bụ Ọkpara Chineke, bụrụkwa onye ya na Chineke nọ rị site na mbụ egosila anyị onye Chineke bụ, meekwa ka anyị mata ya.